Accueil > Gazetin'ny nosy > Faritra atsinanana: Misy miteniteny foana ny mpanao pôlitika
Faritra atsinanana: Misy miteniteny foana ny mpanao pôlitika
Raikitra ny ady amin’ny samy mpanao pôlitika noho ny fijery tsy mitovy any amin’ny faritra atsinanana iny. Nanao valan-dresaka ho an’ny mpanao gazety omaly ny solombavambahoaka efatra avy any amin’ny faritra atsinanana iny. Ingahy Ndalana Hasina avy ao amin’ny Mapar (Miaraka amin’i Andry Nirina Rajoelina) voafidy avy any Tanambao Manampotsy, Razafindrasana Raulan avy ao Vatomandry (Hvm), Mouhamed Ahmad (HVM) ao Fenoarivo-Atsinanana ary Randriamahefa Henri Charles avy ao Moramanga.
Aoka hoy izy ireo mba hilaza ny marina ny mpanao pôlitika satria manely tsaho no ataony. Marihin’izy ireo fa mandeha ny fanamboarana ny làlana mandeha any Toamasina avy eto Antananarivo. Hita ny fiovana ary miara-mahita izany ny mpampiasa làlana rehetra. Toa izany koa ny mankany Alaotra Mangoro izay efa nahavitana tetezana 8 amin’izao fotoana izao ary fanamboarana tara ihany koa ny làlana 3,5 km izay tena nampijaly ny mpandeha. Efa nanomboka ny fanamboarana ny lalana mampitohy an’i Fenoarivo Atsinanana sy Soanierana Ivongo ary efa misy vita amin’izao fotoana izao.
Tsy manda ny filazana sy ny fahafahana ataon’ny mpanao pôlitika na ny olona izay te hiresaka ireto solombavambahoaka ireto satria izany no demôkrasia nefa aoka kosa mba hilaza ny marina fa tsy handainga sy hanala baraka olona. Ny manahirana ankehitriny hoy ihany ireto depiote ireto dia mpanao pôlitika efa tsy mandeha any amin’ny toerana nihaviany intsony fa mipetraka eto Antananarivo no manao fanambarana mandainga amin’ny mpiara-belona aminy.
Maro no fanehoan-kevitra mifanohitra ankehitriny ka tokony ho mailo ny rehetra satria betsaka ny mpanao pôlitika no miteniteny foana mba hisarihana saim-bahoaka na mpomba fanjakana izany na mpanohitra.